Degmadu waxay dejisay qorshe 3-qaybood ah oo wax looga qabanayo dhaqaalaha, tas-hiilaadka | Faahfaahinta Wararka Degmada
Intii lagu gudajiray fadhiga shaqada Maarso 25 gudiga iskuulka waxay yeesheen wada hadal laxiriira afti dhicis 2021. Degmadu waxay haysataa hal fursad oo keliya - Noofambar 2, 2021 - inay cusboonaysiiso canshuuraha shaqeeya ama ay lumiso qiyaastii $ 12 milyan. Waxbadan ka baro canshuurta . Canshuurta la qaadayo ka sokow, guddiga ayaa sidoo kale ka fikiraya inay dhacdo suurtagalnimada dammaanad si loo xalliyo baahiyaha xarunta. Intii lagu gudajiray fadhiga shaqada, maamulka ayaa kula taliyay gudiga inay tixgeliyaan sedex talaabo oo wax looga qabanayo maalgalinta degmada iyo baahiyaha xarunta, oo ay kamid yihiin:
Qaadashada canshuurta kirada si loo maalgaliyo ballaarinta degdegga ah ee Dugsiga Hoose ee Brookview.
Qabashada aftida canshuuraha bisha Nofeembar 2021 si loo cusbooneysiiyo canshuuraha dhacay iyo kordhinta maalgelinta iyada oo la kordhinayo canshuurta hawlgalka ama mashaariicda raasumaalka / cashuurta tiknoolajiyadda.
Qabashada aftida dammaanadda gu'ga 2022 si wax looga qabto beddelka Lake Elmo iyo mashaariicda kale ee xarumaha ee aan weli la go'aamin.
In kasta oo aan wax go'aan ah la gaarin intii lagu jiray kalfadhigii shaqada, guddigu wuxuu weydiistay in soo-jeedinta kirada heshiiska la keeno kulanka guddiga iskuulka ee 8 Abriil oo ah shey tallaabo ah. Haddii levy levy la oggolaado, dhismuhu wuxuu ka bilaabmi karaa ballaadhinta xagaagan oo ku dariddu waxay u furnaan doontaa sannad dugsiyeedka 2022-2023 ama ka hor.
Guddigu wuxuu sidoo kale maamulka siiyay tilmaam si loo qorsheeyo codsi afti curaar oo guga 2022, taas oo u oggolaan doonta waqti dheeri ah hoggaamiyeyaasha degmadu inay darsaan meelaha iyo baahiyaha xarunta, tixgeliyaan hagaajinta xuduudaha, iyo daawashada isbeddellada diiwaangelinta. Wadahadallo dheeri ah oo ku saabsan codsashada canshuurta hawlgalka ee Noofambar 2021 ayaa ka dhici doona fadhiyada shaqada ee mustaqbalka.
Booqo bogga aftida.